2007-10-11 @ 07:41 in Toekarena
Marina fa ho fenon’ny setroka indray ny lanitry Gasikara fa tsy any akory ny resaka tiako ahatongavana. Zavadoza eto amin’ny firenena io tranga io ka tsy azo hamaivanina velively. Ny mpanaraka ny eto amin’ity blaogy ity dia mahafantatra tsara ny famerimberenako ny tsy fankatoavako ity fanapaha-jiro ity. Betsaka ny lafiny tsy itiavako azy na dia mody hoe ny fihemoran’ny mpandraharaha tsy hanao zavatra eto raha ho tapatapahina lava ny jiro no hany ambara. Fatiantoka ho azy ny hiaritra tsy fisian-jiro nefa ny asa rehetra, raha tsy ny ankamaroany dia miankina amin’io avokoa.
Efa nasehoko tsara ny safidiko fony nialoha ny fifidianana ho depiote ireny. Nolazaiko mazava tsara fa nirotsaka teo amin’ny fari-pifidianana nisy ahy ny minisitry ny angovo tompon’andraikitra voalohany misahana io resaka io ka tsy hifidy azy velively aho ho fanoherako izay nataony nandritra ny nitantanany ny jirama aloha dia ny minisitera mihitsy avy eo. Lazaiko etoana fa nilaza ny hevitro tamin’ny radio mihitsy aho ka niteny hoe tsarao amin’ny asany ny minisitra nirotsaka fa ny ahy delestazy no fantatro. Saingy aim-bery maina izany antsoko izany. Ankehitriny…
Tahaka ny mandainga aho raha manoratra aminareo etoana fa ny fari-pifidianana nisy indrindra io minisitry ny angovo io no ifandimbiasan’ny delestazy amin’izao fotoana izao: Antaninarenina, Isoraka, Isotry, Tsaralalàna, 67ha, Ampefiloha fa ny faritra hafa (Boriborintany moa no ilazany azy) kosa dia gaga raha iresahanao izany toe-javatra izany. Ho an’Antananarivo Renivohitra io, tompoko. Satria nifidy ahy ireo (angamba hoy ny tenany any ambadika any) dia nankasitraka izay nataoko izany ka amin’izy ireo ihany no hanaovako delestazy ho an’Antananarivo renivohitra. Ny tanàna hafa manodidina ihany koa dia miverina soa aman-tsara ny delestazy.
Nandre resaka ihany koa moa aho fa izay ela izay ka fantatra fa mbola hafa ny safidin’ny mponina tao an-tampontanànan’I Toamasina dia tsy nisy loatra ny delestazy tany. Fa nony injay lany ho depiote ny avy ao amin’ny TIM dia arahaba ry delestazy, avelao koa izahay mba hiaina azy. Ny ao Mahajanga tampon-tanàna indray moa tsy manana olona hifandraisana any loatra aho. Mino aho fa noho io resaka io no nampihintsana be dia be ny TIM tao amin’io tanàna io. Efa ela niaretana manko ny tao. Ny any Toliary moa, izay gropy rehetra tonga any simba avokoa…mahery loatra angaha ny toetr’andro any ( mba tsy ilazana hoe misy mangalatra hatrany angaha ny piesy rehefa tonga any na fatin-gropy foana no mba alefa any).
Ankehitriny ihany, miandry Lafrantsa. Hanampy ny fanarenana ny jirama izahay (indrindra raha omenareo anay ny fitantanana io sehatra io). Amin’ny alalan’ny solontenan’ny tahirim-bola iraisam-pirenena izay milaza ny tsy maintsy hampakarana ny vidin-jiro eto Madagasikara no hilazana ny fanampian’ny firenena any ivelany ny jirama. Angaha misy miteny ny olona? Efa miandry fotsiny. Ny mpitondra fanjakana koa, indrindra fa ny filoha Ravalomanana, tsy aharenesam-peo manohitra izay fampakarana ny vidin-jiro izay.
Fa ny tsaroako tsara nanombohan’ity delestazy ity dia ny filazana mialoha fa tsy maharaka ny solika manodina ny milina, avy eo dia hoe hampiana milina hafa ny eo amin’ny tohadranon’Andekaleka mba ahafahana manana herin’aratra matanjatanjaka kokoa ka mba mihafy kely aloha isika. Hay ity resaka ity ny delestazy mandeha fa ny milina napetraka toa tsy hita akory. Aty amin’ny enimbolana faharoan’ny taona 2007 vao lazaina fa hatao (mbola fotoana ho avy ihany koa) ny tolobidy amin’ny fametrahana milina vaovao sy fikojakojana ny efa eo. Dray izany izy! Tsy aleo izany mieritreritra hoe amin’ny fotoana fahatelo itondran’ny filoha Ravalomanana any mihitsy angamba vao tena hisy ny hijerena (mbola hijerena fa tsy miditra amin’ny asa) ity raharahan’ny jiro eto Madagasikara ity.
Fa mbola nofinofy ihany izany raha mbola io minisitry ny angovo io ihany no mitantana io sampan-draharaha io. Tokony hoporofoin’ingahy minisitra amin’ny asa vita fa tsy marina ny tsaho efa mahery loatra manao hoe ahodiny avokoa ny vola tokony nikarakarana io orinasa mihafadiranovana io ka mahatratra anjatony miliara izany vola miodina izany… Tsaho io nefa fantatsika tsara ny Malagasy fa ny tsaho no inoany kokoa satria resaka afenina ireny.